လေထုထဲမှ သောက်သုံးရေထုတ်ယူနိုင်သည့် စက်ရုပ်ကို အီဂျစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက တီထွင် - Xinhua News Agency
ကိုင်ရို၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အီဂျစ်လူမျိုး စက်ယန္တရားများပြုပြင်ရေးအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက အသိဉာဏ်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍လေထုထဲ၌ ပါဝင်သည့်ရေမှုန်ရေမွှားများကိုထုတ်ယူကာ သောက်သုံးရေအဖြစ်အသုံးပြု နိုင်သည့် စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက လေထုထဲက စိုထိုင်းမှုတွေကိုစုပ်ယူပြီး ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ အဲဒီနည်းပညာကို တီထွင်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့တာပါ” လို့ ဂျီနီဗာတီထွင်မှုဆု ရရှိခဲ့သူ မာမွတ်အယ်လ်ခိုမီက ဆင်ဟွာ ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
အီဂျစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တန်တာမြို့မှအင်ဂျင်နီယာ မာမွတ် က နာဆာ၏ မားစ်ဂြိုဟ်သို့ သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်ကို အားကျအတုယူခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။ မားစ်ဂြိုဟ်၏ ရာသီဥတုသည် စိုထိုင်းမှုအမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည့်အပြင် တစ်ချိန်တည်းတွင် အလွန်ခြောက်သွေ့သည့်ရာသီဥတုလည်းရှိကြောင်းသိရှိခဲ့ကြသည်။
စိုထိုင်းမှု မှ ရေထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာမှာ အသစ်အဆန်းတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ယခု တီထွင်ထားသည့် နည်းပညာများကို ခက်ခဲသည့်အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိဦးမည်မဟုတ်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“စိုထိုင်းမှုကိုငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ သန့်စင်သည့် ရေ ရရှိပြီးနောက် သောက်သုံးနိုင်သည့်ရေရှိစေ သည်အထိ တွင်းထွက် ဆားဓါတ်ဖြည့်တင်းခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရကြောင်း” သူက ဆင်ဟွာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
“အဲဒီ ဆားတွေကို အသိဉာဏ်နည်းပညာအသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ရေအရည်အသွေးကို အာမခံမှုရှိအောင်လို့ အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ ရေရရှိစေတဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခု တီထွင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ” ဟု သူက ဆိုသည်။
မာမွတ်အနေဖြင့် ယခုနည်းပညာကို တီထွင်ရန် အဓိက တွန်းအားတစ်ခုမှာ သန့်ရှင်းသည့် သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ခဲယဉ်းမှုများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
“ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုဟာပိုမိုကြီးထွားလာပြီးနောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာ စိုထိုင်းမှုများလည်းတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဟာ စိုထိုင်းမှုကိုလျှော့ချပြီး ဂေဟဗေဒဟန်ချက်ညီမျှမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ စိုထိုင်းမှုကနေ ရေထုတ်ယူဖို့ အတွက် ရေထုတ်ယူရေးနည်းလမ်းကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်တဲ့ နည်းပညာကို တီထွင်ဖြစ်အောင် တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ပင်လယ်ရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ် ပြောင်းလဲရာတွင်ရေတစ်လီတာအတွက် ကုန်ကျငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀ ဆင့် ကျသင့်ပြီး ယခုတီထွင်ထားသည့်ကိရိယာဖြင့်ရေထုတ်ယူပါက ရေတစ်လီတာကို ၁.၅ စင့်သာကျသင့်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အီဂျစ်အင်ဂျင်နီယာကမှတ်ချက်ပြုသည်။
ယခု ကိရိယာကို သဲကန္တာရများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆိုလာပြားများမှ တစ်ဆင့်စွမ်းအင်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ရာ သဲကန္တာရအတွင်းရှိ မြို့များစွာ ၌ ငွေကုန်ကြေးကျ များစွာမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဟု သူ က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“စက်ရုပ်ဟာ တစ်ရက်ကို စွမ်းအင် ဝပ်၆၀လောက် အသုံးပြုရတာကြောင့် အခြား ရေထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာများနှင့် နှိုင်းစာပါက စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုမှာ ကျစ်လစ်နည်းပါးကြောင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသုံးပြုပါက တစ်ရက်လျှင်‌ ရေလီတာပေါင်း ၂၄ လီတာခန့်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း” အယ်လ် ခိုမီ က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အလားတူနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အပင်များသည် နေ့စဉ် ရေလီတာပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ရာ ရေအရင်းအမြစ်များ မရှိသည့် သဲကန္တာရ များ၌ စိုက်ပျိုးနိုင်မည်ဟု အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သူကဆိုသည်။
“ အာကာသ သုတေသီတွေ က ဒီစက်ရုပ်ကို အင်္ဂါဂြိုဟ် ခရီးစဉ်တွေမှာ အသုံးပြုဖို့နဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ တနေ့နေ့မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ် ပေါ်မှာ လူတွေနေထိုင်မယ့် စိတ်ကူးကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ ဒီနည်းပညာကို အထောက်အပံ့အဖြစ်ရယူနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု အယ်လ်ခိုမီက ဆိုသည်။ (Xinhua)
CAIRO, Oct. 24 (Xinhua) — An Egyptian mechatronics engineer has inventedarobot that can extract potable water by condensing humidity in the air and turn it into drinking water using artificial intelligence.
“I started to think about developing this technology to absorb moisture in the air and turn it into water since 2013,” Mahmoud El-Komy, winner of the Geneva Invention Award, told Xinhua.
The engineer, from Tanta city in northern Egypt, said he was inspired by NASA’s flights to Mars. The weather on Mars is known to be saturated with high levels of humidity, while is very dry at the same time.
“After obtaining pure water through the process of moisture condensation, the process of adding mineral salts begins until it becomes drinkable,” he told Xinhua.
“These salts are added through artificial intelligence technology in proportions that comply with the standards of the World Health Organization. I test it inalaboratory provided by the Ministry of Environment in Egypt to ensure the quality of water and this helps me develop the project to obtain water conforming to international standards,” he noted.
“There is great global warming that has caused an increase in humidity in the world, and this prompted me to developatechnology to extract water from moisture to maintain ecological balance by reducing moisture by exploiting it to generate water,” he said.
“The robot consumes 60 watts of energy per day, which is modest compared to other water generation technologies. On earth, it can generate up to 24 liters of water per day,” El-Koumy noted.
Using the same technology, plants that generate up to 50,000 liters of water per day can be built in desert areas where do not have natural water sources, according to the engineer.
“I hope that the robot will be used by space scientists on their trips to Mars, and that this technology will help scientists make the dream of human life on Marsareality some day,” El-Koumy said.
Smart China Expo တွင် အာရုံစိုက်ခံခဲ့ရသည့် လက်ဖက်ရည်ဖျော် သည့် စက်ရုပ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်း စက်ရုပ်များအား နေရာချထား